Traditional နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/17)
There are countless places across Japan where visitors can feel the special history and traditions of that location. Let us be your guide to historical buildings and townscapes, temples and shrines, ruins, castles, and traditional ceremonies.
ရိုးရိုးနာမည် ( မျက်မှန်တံတတား )။ အုတ်နဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အနုပညာတံတားဖြစ်ပြီး အလျား ၉၁မီတာ ၊ အမြင့် ၃၁ မီတာ ရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အကြီးဆ...